Archive du 29-déc-2021
Làlam-pirenena faharoa 4 indray matin’ny lozam-pifamoivoizana
Nitragana loza mahatsiravina teo amin'ny sampanana Manambato Brickaville tamin'ny Alahady lasa teo tany amin'iny lalam-pirenena faharoa iny.
Olona misy soritr’aretin’ny coronavirus Tsy miandry valim-pitiliana fa tonga dia tsaboina
Tsy voatery hanao fitiliana na hiandry valina fitiliana ny marary misy soritr’aretina, fa tonga dia tsaboana avy hatrany amin’ny alalan’ilay paikady antsoina hoe:
Notorian’ny Depiote Rossy ? Ampanantsoin’ny Cybercriminalité i Jean Nirina anio
Nahazo taratasy fampiantsoina eny anivon'ny « service de lutte contre la cybercriminalité » etsy amin'ny Toby Ratsimandrava indray ny filohan'ny Hafari Malagasy Atoa Rafanomezantsoa Jean Nirina rahampitso Alarobia 29 desambra 2021.
Fiara “fourgon” avy any Toamasina Nahatrarana toaka voarara 2500 litatra
Tsy mbola misy lalàna nivoaka ahazoan-dalana mivarotra na manjifa na mihary toaka voarara eto amin'ny firenena Malagasy, hoy omaly ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.
Mitohy ny trafika goavana Volamena 49kg sarona tany Kaomoro
Nahatrarana bologam-bolamena milanja 49kg be izao indray tatsy amin’ny Nosy Kaomoro omaly talata 28 desambra 2021.
Kabary faran’ny taonan’ny Filoha Sady handoka tena no mbola hampanantenana…
Efa manomboka mahazatra izy ity! Miandry fampanantenana vaovao indray ny mpanara-baovao raha maheno fa hisy ny kabaran’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, amin’ny 31 desambra izao.
PASITERA MAILHOL Mbola ho mafy ho an’ny Malagasy ny 2022…
Mbola ho mafy ho an’ny Malagasy ny hiatrehana ny taona vaovao 2022 raha araka ny fanazavan’ny pasitera Mailhol, filoha mpanorina ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara tamin’ny mpanao gazety omaly.
Fiarovana ny zon'ny mpanjifa Maro ny zavatra tokony ho fantatra
Samy manana ny anjara andraikitra tandrify azy eo amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ny Minisiteran'ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana (MICC), ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka
Loza tamin’ny angidim-by Tsy maintsy hiatrika fandidiana ny SEG
Noho ny ratra sy ny voina nahazo azy vokatry ny fianjeran'ilay angidimby tany amin’ny 18 km tsy hidirana an’I Foulpointe, namonjena ny ain’ny mpiray tanindrazana tany Soanierana Ivongo ny 20 desambra 2020 dia tsy maintsy
FANADIOVANA SY FIDIOVANA Nifarana ny tetikasa SDAUM
Nifarana tamin’ity taona ity rehefa naharitra 15 taona ilay tetikasa SDAUM (Schéma directeur d’assainissement urbain de Madagascar) eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana.
Fanendahana finday sy firavaka Lehilahy roa voasambotra tao anaty taksibe
Lehilahy miisa 02 no voasambotry ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSP7 teny amin’ny faritra 67ha iny ny alatsinainy 27 desambra rehefa avy nangalatra.
Randrana sendikaly Mila olana ny fisitrahana fisotroan-dronono
Maro, farany teo ireo mpisotro ronono nihazakazaka nila vonjy tamin’ny sendika, hoy ny avy eo anivon’ny Randrana sendikaly. Isany nahagaga izany hoe izy ireo manana olana daholo, hoy ity sendika ity.
Gerard Ramamimampionona “Ny marina no mahafaka ny firenentsika”
Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny fetin’ny noely izay fetin’ny fifaliana sy fiadanana, hoy ny filoha lefitry ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy na CFM, Gerard Ramamimampionona, omaly.
Ho taonan’ny inona indray ?
“Ho taonan’ny asa, taonan’ny fanarenana, taonan’ny fanorenana,… ity taona ity”, hoy ny Filoham-pirenena raha nanao kabary famaranana ny taona 2020 sy fitsenana ny 2021 izay hifarana afaka 48 ora.